မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး IIMM ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းမှု ယန္တရားက ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ပုံမှန်ထိတွေ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ IIMM ရဲ့အကြီးအကဲ Nicholas KoumJian က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခု အသံမလွှင့်ခင်လေးမှာ VOA ရုံးချုပ်ရှိရာကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ KoumJian ကို VOA ရဲ့အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင် ။. ။ အဲဒီတော့ ဦးကျော်ဇံသာရေ ပြောပြပါဦး ခင်ဗျ .... FB -က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ထိန်ချန် ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီး နယူးယောက်မြို့ ခရိုင်တရားရုံးတခုမှာ တရားစွဲခံရတယ် ။ အဲဒီအချက်အလက်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ တရားရုံးက အမိန့်ချတာကို FB က ငြင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ မစ္စတာ KoumJian က ဘာပြန် ပြောသလဲ ခင်ဗျ ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။.။ မစ္စတာ KoumJian ပြောတာကတော့ ဒီအမှုကို NY မှာ တရားစွဲတာ သူတို့မဟုတ်ဘူး။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက စွဲတာလို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ကတော့ စပြီး တာဝန်ပေးခံရ ကတည်းက FB နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တယ်၊ အထောက်အထား တချို့ကိုလည်း FB က လွဲပေးခဲ့တာ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာ KoumJian ။.။ တကယ်တော့ ဒီ FB ကို တရားစွဲဆိုတာဟာ ICJ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ IIMM ကတော့ ၂၀၁၉ ဂျူလိုင်မှာ စတင် တာဝန်ပေးခံရ ကတည်းက ၊ FB နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ FB ကလည်း IIMM လိုချင်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို တစိတ်တဒေသ ပံ့ပိုးခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်ကို သူတို့ဆီက အထောက်အထားတွေ ပိုရလာလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင် ။. ။ ဆိုတော့ သူတို့က FB ဆီက ဘယ်လို အထောက်အထားတွေကို လိုချင်တာတဲ့လဲ ။ သူတို့ မတိုင်ခင် ရှိခဲ့တဲ့ IIFF ခေါ် အထောက်အထား ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထဲမှာတော့ - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု တွေကို အထောက်အထား သက်သေ သက်ကာယအပြည့်အစုံနဲ့ ရေးထားတာပဲ မဟုတ်လား ။ ဆိုတော့ မစ္စတာ KoumJian တို့ လိုချင်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ဆိုတာက ဘာလဲခင်ဗျ ။
ဦးကျော်ဇံသာ။.။ ဒီကိစ္စမှာ သူက အသေးစိတ်ကိုတော့ မပြောပါဘူး။ ယေဘူယျအချက်အလက်ကိုပဲ ရည်ညွှန်း ပြောပါတယ်။ အဓိကတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြီးထွားခဲ့ရတာဟာ FB ပေါ်မှာ ရေးသားချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် FB ရဲ့အထောက်အထား အသေးစိတ်ကို သိချင်တာပါ။ ဒီကတဆင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မစ္စတာ KoumJian ။.။ ဂမ်ဘီယာကတော့ ဒီကိစ္စကို NY တရားရုံးမှာ အယူခံတက်ထားပါတယ်။ IIMM အဖွဲ့အနေနဲ့ အထောက်အထားတွေ ရရှိပိုင်ခွင့် အတွက်လည်း ဒီအမှုက အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဂမ်ဘီယာဘက်က တရားရုံးမှာ အပြန်လှန် လေ
ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင် ။. ။ အခုလည်းပဲ မြန်မာနိ်ုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ အများကြီး ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပီး အမုန်းစကားတွေ သတင်းမှားတွေကို FB ပေါ်မှာ ၂ ဖက်စလုံးက အများပြား ရေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော သူ့ကို မေးဖြစ်သေးလား ခင်ဗျ ။
ဦးကျော်ဇံသာ။.။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ FB နဲ့ သူတို့ ၊ ပုံမှန် အဆက်သွယ်ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း သူ ကောင်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်တဲ့။ သူ့ကိုတောင် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ် တယောက်နဲ့ အခြားနိုင်ငံ တနေရာမှာ တွေ့ဆုံကြတယ်ဆိုပြီး FB ပေါ်မှာ စွပ်စွဲ ရေးထားတာ တွေ့မိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ တွေ့တဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ ရေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို သူက FB နဲ့ ညှိပြီး ပြန်ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ တခြား အမုန်းပွားစေတဲ့ကိစ္စ ၊ အကြမ်းဖက်ဖို့ လှုံ့ဆော်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း FB နဲ့ ညှိပြီးလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုဥာဏ်ဝင်းအောင် ။. ။ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေကို မြန်မာနိုင်ငံက လူတချို့က ပြောနေတာက - သူတို့ဟာ စစ်တပ်ကိုပဲ အပြစ်ရှာပြီး တဖက်သတ် ပြောနေတယ်။ လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ ဒလန်လို့ စွပ်စွဲပြီး သတ်ဖြတ်ခံနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော IIMM အကြီးအကဲနဲ့ ဆွေးနွေး ဖြစ်သေးလားခင်ဗျ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။.။မေးဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့အဖွဲ့ အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာတင်တဲ့ အစီရင်ခံစာ အပါအဝင် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်တွေထဲမှာ သူတို့ ဘက်လိုက်မှု မရှိဘူးဆိုတာ အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားတယ်လို့ ခုလို ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ KoumJian ။.။ ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် စိုးရိမ်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာ ဒါမှမဟုတ် ကျူးလွန်ခြင်း ခံရတဲ့လူတွေဟာ ဘယ်လူမျိုးတွေလဲ ၊ ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သလဲ၊ ဘယ် နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေထဲကလဲ ဆိုတဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဆိုတာ ခွဲခြားမှု မရှိပါဘူး။ ခင်ဗျား ဘယ်အုပ်စုက လာတယ်၊ ဘယ်လို နိုင်ငံရေး ယုံကြည်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူမတည်ပါဘူး။ ပြစ်မှုကို ဘယ်သူမဆို ကျူးလွန်တတ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဘယ်ဖက်က ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုဖြစ်ဖြစ် ၊ စစ်တပ်က ကျူးလွန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြား ဘယ်ဖက်က ကျူးလွန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စုံစမ်း ဖေါ်ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံက လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖေါကျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး IIMM ချေါ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လှတျလပျသော စုံစမျးမှု ယန်တရားက ဖစျေ့ဘုတျနဲ့ ပုံမှနျထိတှေ့ ဆှေးနှေးမှုတှေ ရှိနတေယျလို့ IIMM ရဲ့အကွီးအကဲ Nicholas KoumJian က ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ကနြျောတို့ အခု အသံမလှငျ့ခငျလေးမှာ VOA ရုံးခြုပျရှိရာကို လာရောကျခဲ့တဲ့ မစ်စတာ KoumJian ကို VOA ရဲ့အယျဒီတာ ဦးကြျောဇံသာက တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုဉာဏျဝငျးအောငျ ။. ။ အဲဒီတော့ ဦးကြျောဇံသာရေ ပွောပွပါဦး ခငျဗြ .... FB -က မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အခွအေနကေို ထိနျခနျြ ထားခဲ့တယျဆိုပွီး နယူးယောကျမွို့ ခရိုငျတရားရုံးတခုမှာ တရားစှဲခံရတယျ ။ အဲဒီအခကျြအလကျတှေ ထုတျပေးဖို့ တရားရုံးက အမိနျ့ခတြာကို FB က ငွငျးခဲ့တယျ။ အဲဒီတော့ မစ်စတာ KoumJian က ဘာပွနျ ပွောသလဲ ခငျဗြ ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ မစ်စတာ KoumJian ပွောတာကတော့ ဒီအမှုကို NY မှာ တရားစှဲတာ သူတို့မဟုတျဘူး။ ဂမျဘီယာနိုငျငံက စှဲတာလို့ ဆိုပါတယျ။ သူတို့အဖှဲ့ကတော့ စပွီး တာဝနျပေးခံရ ကတညျးက FB နဲ့ အဆကျအသှယျရှိခဲ့တယျ၊ အထောကျအထား တခြို့ကိုလညျး FB က လှဲပေးခဲ့တာ ရှိတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
မစ်စတာ KoumJian ။. ။ တကယျတော့ ဒီ FB ကို တရားစှဲဆိုတာဟာ ICJ မှာ မွနျမာနိုငျငံကို တရားစှဲဆိုထားတဲ့ ဂမျဘီယာနိုငျငံကသာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ IIMM ကတော့ ၂၀၁၉ ဂြူလိုငျမှာ စတငျ တာဝနျပေးခံရ ကတညျးက ၊ FB နဲ့ ထိတှဆေ့ကျဆံ ဆှေးနှေးမှုတှေ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ FB ကလညျး IIMM လိုခငျြတဲ့ အထောကျအထားတှကေို တစိတျတဒသေ ပံ့ပိုးခဲ့ပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ။ နောငျကို သူတို့ဆီက အထောကျအထားတှေ ပိုရလာလိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့နပေါတယျ။
ကိုဉာဏျဝငျးအောငျ ။. ။ ဆိုတော့ သူတို့က FB ဆီက ဘယျလို အထောကျအထားတှကေို လိုခငျြတာတဲ့လဲ ။ သူတို့ မတိုငျခငျ ရှိခဲ့တဲ့ IIFF ချေါ အထောကျအထား ရှာဖှရေေးအဖှဲ့ရဲ့ အစီရငျခံစာ ထဲမှာတော့ - မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖေါကျမှု တှကေို အထောကျအထား သကျသေ သကျကာယအပွညျ့အစုံနဲ့ ရေးထားတာပဲ မဟုတျလား ။ ဆိုတော့ မစ်စတာ KoumJian တို့ လိုခငျြတဲ့ အထောကျအထားတှေ ဆိုတာက ဘာလဲခငျဗြ ။
ဦးကြျောဇံသာ။. ။ ဒီကိစ်စမှာ သူက အသေးစိတျကိုတော့ မပွောပါဘူး။ ယဘေူယအြခကျြအလကျကိုပဲ ရညျညှနျး ပွောပါတယျ။ အဓိကတော့ အကွမျးဖကျမှုတှေ ကွီးထှားခဲ့ရတာဟာ FB ပျေါမှာ ရေးသားခကျြတှကွေောငျ့ဖွဈတယျ ဆိုတာကို သိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ FB ရဲ့အထောကျအထား အသေးစိတျကို သိခငျြတာပါ။ ဒီကတဆငျ့ ပွဈမှုကြူးလှနျတဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျ တဦးခငျြးရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို သိနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
မစ်စတာ KoumJian ။. ။ ဂမျဘီယာကတော့ ဒီကိစ်စကို NY တရားရုံးမှာ အယူခံတကျထားပါတယျ။ IIMM အဖှဲ့အနနေဲ့ အထောကျအထားတှေ ရရှိပိုငျခှငျ့ အတှကျလညျး ဒီအမှုက အထောကျအပံ့ ဖွဈစမေယျလို့ ဆိုတယျ။ ဂမျဘီယာဘကျက တရားရုံးမှာ အပွနျလှနျ လေ
ကိုဉာဏျဝငျးအောငျ ။. ။ အခုလညျးပဲ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖေါကျမှုတှေ အမြားကွီး ဆကျဖွဈနတေယျ။ နောကျပီး အမုနျးစကားတှေ သတငျးမှားတှကေို FB ပျေါမှာ ၂ ဖကျစလုံးက အမြားပွား ရေးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ရော သူ့ကို မေးဖွဈသေးလား ခငျဗြ ။
ဦးကြျောဇံသာ။. ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ FB နဲ့ သူတို့ ၊ ပုံမှနျ အဆကျသှယျရှိနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ အခု ဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေကေိုလညျး သူ ကောငျးကောငျး နားလညျသဘောပေါကျပါတယျတဲ့။ သူ့ကိုတောငျ မွနျမာစဈဗိုလျခြုပျ တယောကျနဲ့ အခွားနိုငျငံ တနရောမှာ တှဆေုံ့ကွတယျဆိုပွီး FB ပျေါမှာ စှပျစှဲ ရေးထားတာ တှမေိ့ပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူနဲ့ တှတေဲ့သူတှကေို အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျရမယျလို့ ရေးထားတာကိုလညျး တှရေ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒါကို သူက FB နဲ့ ညှိပွီး ပွနျဖွုတျခခြဲ့တယျ။ တခွား အမုနျးပှားစတေဲ့ကိစ်စ ၊ အကွမျးဖကျဖို့ လှုံ့ဆျောတဲ့ကိစ်စတှကေိုလညျး FB နဲ့ ညှိပွီးလုပျဆောငျသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကိုဉာဏျဝငျးအောငျ ။. ။ ဒီလို လူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့တှကေို မွနျမာနိုငျငံက လူတခြို့က ပွောနတောက - သူတို့ဟာ စဈတပျကိုပဲ အပွဈရှာပွီး တဖကျသတျ ပွောနတေယျ။ လတျတလော ဖွဈနတေဲ့ ဒလနျလို့ စှပျစှဲပွီး သတျဖွတျခံနတေဲ့ကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ရော IIMM အကွီးအကဲနဲ့ ဆှေးနှေး ဖွဈသေးလားခငျဗြ။
ဦးကြျောဇံသာ ။. ။ မေးဖွဈပါတယျ ။ သူတို့အဖှဲ့ အနနေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးကောငျစီမှာတငျတဲ့ အစီရငျခံစာ အပါအဝငျ လူသိရှငျကွား ထုတျပွနျတဲ့ အခကျြတှထေဲမှာ သူတို့ ဘကျလိုကျမှု မရှိဘူးဆိုတာ အတိအလငျး ဖျေါပွထားတယျလို့ ခုလို ပွောပါတယျ။
မစ်စတာ KoumJian ။. ။ ကနြျောတို့ဟာ မွနျမာနိုငျငံက လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှအေတှကျ စိုးရိမျပါတယျ။ ပွဈမှုကြူးလှနျသူတှဟော ဒါမှမဟုတျ ကြူးလှနျခွငျး ခံရတဲ့လူတှဟော ဘယျလူမြိုးတှလေဲ ၊ ဘယျဘာသာ ကိုးကှယျသလဲ၊ ဘယျ နိုငျငံရေး အငျအားစုတှထေဲကလဲ ဆိုတဲ့ ကှဲလှဲမှုတှကေို ဂရုမစိုကျပါဘူး။ နိုငျငံတကာ ဥပဒဆေိုတာ ခှဲခွားမှု မရှိပါဘူး။ ခငျဗြား ဘယျအုပျစုက လာတယျ၊ ဘယျလို နိုငျငံရေး ယုံကွညျမှု ရှိတယျဆိုတဲ့အပျေါမှာ မူမတညျပါဘူး။ ပွဈမှုကို ဘယျသူမဆို ကြူးလှနျတတျကွပါတယျ။ ကနြျောတို့ကလညျး ဘယျဖကျက ကြူးလှနျတဲ့ ပွဈမှုဖွဈဖွဈ ၊ စဈတပျက ကြူးလှနျတာပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ အခွား ဘယျဖကျက ကြူးလှနျတာပဲ ဖွဈဖွဈ စုံစမျး ဖျေါထုတျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။